နေရာထိုင်ခင်း | Holmbygden.se
Holmes တနင်္ဂနွေအတွက်နေရာထိုင်ခင်းရှာဖွေနေ, နွေရာသီအတွက်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ဟာပျူငှါနွေးထွေးသောအိမ်တွင်း၌သငျငှားရမ်းဒါမှမဟုတ်ပင်လှပသောကျေးလက်ပြောင်းရွှေ့ဖို့ရှာဖွေနေ?
Holmes ခုနှစ်တွင်အများအပြားနေ့ချင်းညချင်းနေရာထိုင်ခင်းများမှာ- သို့မဟုတ်နေရာထိုင်ခင်း, ရောင်းရန်လည်းပုဂ္ဂလိကသောနေရာများ.
• ဒီနေရာမှာသင့်ရဲ့လယ်သမား Advertise, အခမဲ့! • Holmes ပြောင်းရွှေ့အပေါ်အတှေး?
• ဤနေရာတွင်အသစ်သောအလုပ်အကိုင်အခွင့်အဖို့ Subscribe.
ယင်း၏အခြိနျပိုငျးနေထိုင်သူများ “Änglagård” ကိုယ့် Holmes.
Sandnäsbadenစခန်း & စားသောက်ဆိုင် (တစ်နှစ်ပတ်လုံး)
သင်တစ်ဦးယာဉ်တန်းကိုရောက်စေဖို့လိုခငျြသို့မဟုတ်တဲကိုစခန်းချနေထိုင်မည့်လည်းရေကန် Holmes ချွတ်၏ကမ်းနားမှာလှလှပပအခြေအနေပိုနှစ်သက်စေခြင်းငှါ, အကယ်..
သူတို့ရဲ့ website တွင်ဆက်ဖတ်ရန်.
လှေနှင့်ကနူးမှဝင်ရောက်ခွင့်နှင့်အတူကမ်းနားပေါ်တွင်တည်ရှိပြီးနှစ်ဦးကို log ကို cabin.
ကောင်းသောစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အတူ nice အားလပ်ရက်အိမ်သူအိမ်သားတည်ရှိသည် 50 ရေချိုးအတူမီတာHolmsjön- နှင့် angle. အကြီးစားတောင်ဘက်-facing ဟင်းလင်းပြင်.
nice အိမ်တွင်း5ရထားထဲမှာရော့ခ်ကုတင်. ကောင်းသောစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အတူ nice အားလပ်ရက်အိမ်သူအိမ်သားတည်ရှိသည် 50 ရေချိုးအတူမီတာHolmsjön- နှင့် angle. အကြီးစားတောင်ဘက်-facing ဟင်းလင်းပြင်. ယုန်ကိုလိုက်ရှာဖို့ moose အမဲလိုက်ရာသီအတွင်းဒါမှမဟုတ်တနင်္ဂနွေကိုကျော်တစ်ဦးအခန်းငှားရမ်း.
အိမ်ငှါး, 2:တစ်ဦးပေါ်သစ်ကိုတည်ဆောက် ရောင်းချခဲ့!
ထားသိုခန်းနှင့်အတူကျန်ကြွင်းသောအရပ်, ယင်းကိုယူ, အပူပေးစက်နှင့်အတူယာဉ်ရပ်နား.
အိမ်ငှါး, 4:တစ်ဦး ရောင်းချခဲ့!
တွင် 4:သိုလှောင် Holmes အလယ်၌တစ်ဦးကကျန်ကြွင်းသောအရပ်, ယင်းကိုယူ, ကိုယ့်Anundgårdအပူပေးစက်နှင့်အတူယာဉ်ရပ်နား. အနိမ့်အားထုတ်မှု. ဆက်ဖတ်ရန်.
. က q
Holmsjö Butt အတွက် Croft ရောင်းချခဲ့!
သင်ဤ villa alt + ကိုရှာဖွေသစ်တောနှင့်ရေနှစ်မျိုးလုံးမှနီးကပ်အတူ delightfully ငြိမ်းချမ်းပတ်ဝန်းကျင်. အချိန်နေထိုင်သူများ.
Holmsjön၏လှပသောအမြင်များနှင့်အတူတောင်ဘက် facing ကျန်ကြွင်းများကဲ့သို့သာယာအဆင်ပြေမှုများနှင့်အတူတိုင်းပြည်အတွက်အသက်တာကိုပျော်မွေ့ခြင်းနှင့်ဆောင်းရာသီတွင်မြေအောက်ခန်းကားဂိုဒေါင်ထဲမှာကားကိုမောင်းနိုင်တော့မည်ချင်သူကိုသားသမီးများနှင့်အတူထိုကဲ့သို့သောမိသားစုများအတွက်သင့်လျော်သော. ဆက်ဖတ်ရန်.
ဗိုက်ကင်း 191 ရောင်းချခဲ့!
ကောင်းသောငါးဖမ်းရေသည်နှင့်ဒဏ်ငွေ berry သီးများနှင့်မှိုသစ်တောများမှအနီးကပ်ဗီလာ.
Gård i Hissjön ရောင်းချခဲ့!
ရွာHissjönတည်ရှိသော nice အိမ်ခြံမြေ – ကျယ်ပြန့်သစ်တောတွေနဲ့ရေကန်များနှင့်အတူဧရိယာ.
သာမန်ထဲကအကြီးတည်နေရာနှင့်အတူ, သင်သည်ဤအားလပ်ရက်အိမ်ပြန်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်. မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းလုပ်ဗိုလ်မှူးပြုပြင်မှုများနှင့် extension များ.2တံတားများရေကန်နှင့်လှေဆိပ်များတွင်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ရေကူးနိုင်ပါတယ်. ဆက်ဖတ်ရန်.
Holmsjönမှရင်သပ်ရှုမောဖွယ်အမြင်များနှင့်အတူဂရိတ်ဖော်ရွေ villa. မြေညီထပ်တွင်တစ်မီးဖိုချောင်ရှိ, ထမင်းစားခန်း, အသကျရှငျကအခန်းနှင့်ရုံး / အိပ်ခန်း.
ကွန်ဒိုမီနီယံကိုယ်ဝေးကိုရောင်း Holmes ဘုရားကျောင်းထဲကကျောက်ခဲတပစ်Anundgård, တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပွနျလညျထူထောငျ, (အသစ်ခြယ်မီးဖိုချောင်နှင့်အိပ်ခန်းပေါင်းဧည့်ခန်းထဲမှာနည်းနည်း). အကြီးစား takad ဟင်းလင်းပြင်ပေါင်းမြက်ခင်း၏တစိတ်တဒေသ. တိုက်ခန်းကပ်လျက်အကြီးစားအအေးသိုလှောင်မှု. ဆက်ဖတ်ရန်.
လှပသောHolmsjönအပေါ်စီးမြင့်မားသောတည်နေရာနှင့်အတူဗီလာ, Aneby ကောင်းစွာအိမ်ဆောက်,6ခုနှစ်, 157 စတုရန်းမိုင်, ထုအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကားဂိုဒေါင်နှင့်အတူ.
Östbynအတွက်ချစ်စရာကောင်း centenary လှပရုံထောင့်ပတ်လည်မှာသစ်တောနှင့်အတူလှပသောဧရိယာ၌တည်ရှိပြီး. ဆက်ဖတ်ရန်.
လှပသောပတ်ဝန်းကျင်အတွက်မြင့်မားသောအနေအထား, သစ္စာဖောက်ခြင်း၏ပဒေသာနှင့်အတူဤ villa နှင့်အတူ- နှင့်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအာကာသ.
ဒီနေရာတွင်ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်သဟဇာတတှေ့လိမျ့မညျ! ကျွန်းသစ်ဘောင်နှင့်အတူရင့်ကျက်ခြံ / အိမ်တွင်း,5ခုနှစ်, 99 စတုရန်းမိုင်, Holmsjönမှာဒဏ်ငွေက Lakeside. သစ်တောနှင့်လယ်ယာမြေ, 32.000 စတုရန်းမိုင်. Härbre, အိမ်အောက်ခန်း, varmbonat သွန်း, woodshed. သဘာဝချစ်သူများနှင့်ငါးဖမ်းနိူးများအတွက်စံပြ.
ဥယျာဉ်တော်ကြံစည်မှုနှင့်အတူ nice အိမ်တွင်း. သစ်သားကုန်းပတ်နှင့်အတူရံ. နှစ်ခုကုတင်နှင့်ခှေးအိမျ၏ထောက်ပံ့ရေးနှင့်အတူဧည့်အိမ်သူအိမ်သား. ကမ်းခြေများနှင့်ဆိပ်ခံတံတားနှင့်အိပ်စင်ဖို့ Walking အကွာအဝေး.
နှစ်ခုအခန်းပေါင်းနှင့်မီးဖိုချောင်နှင့်အတူလှပသောနွေရာသီအိမ်တွင်း. Holmsjönအတွက်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဆိပ်ခံတံတားနှင့်အတူ nice beachfront.
အိမ်ခြံမြေဈAnundgård – "ဟောငျးAffär'n"
တစ်ဦးကစာရင်းထပ်ပိုင်ဆိုင်မှု Holmes, 400မီတာဘုရားကျောင်း. မြေပြင်ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာပထမဦးဆုံးအထပ်နှင့်ရုံးခန်းဧရိယာပေါ် Living ရပ်ကွက်. မြေပြင်ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာsutterängvåningတိုက်ခန်း၏ extension.
စပျစ်ရည်- အိမ်သူအိမ်သားအောက်, အာလူးအိမ်အောက်ခန်း.
• ဒီနေရာမှာသင့်ရဲ့လယ်သမား Advertise, အခမဲ့!
20/4: Ange (မီးရထား)
Störningar i tågtrafiken pga tågurspå... ဆက်ဖတ်ရန်